QORMOOYINKA – Page 2 – War La Helaa Talo La Helaa
Home » QORMOOYINKA (page 2)
Cannug Yar Oo Ummul Ah Oo Maydkiisa Qashin Qubka Laga Helay Iyo Sheeko Xaadda Dhaqaajineysa
Jiinoow 21/08/2017	630 Views
Jirka cunnug yar oo dhawaan kusoo biiray dunida ayaa laga helay qashin ku ridka garbage oo ku yaalla Al Sajah, ee magaalada Shaariqa ee dalka Isu-Tagga Imaaraadka Carabta. Booliska magaalada ayaa baaritaan ku haya jirka dhalaankaas yar ee lasoo tuuray Khamiistii hore, iyagoona ugu dambeyn war cad kasoo saari doona dadka looga shakiyo in ay leeyihiin ama geysteen falkaas. Aroortii Hore ...
Maxaa Ka Oysiiyay Xaaska David Beckham? (sheeko Xiisa Leh)
Jiinoow 21/08/2017	983 Views
Fashionistadda caanka ah ee Victoria Beckham oo uu qabo xiddiggii ugu caansanaa kubbadda cagta ee David Beckham ayaa barteeda Instagram-ka lawadaagtay sawir iyadoo murug iyo ilmeeynaysa. Todobaadkan ayeey ahayd markii ay saaxiibbadeeda baraha bulshada kula wadaagtay sawirkaas oo su’aalo kala duwan dhaliyay, waxaana la iswayddiinayay waxa rasmiga ah ee kadambeeyay murugada Victoria. Fiidnimadii Jimcaha ayeey ahayd markii loo soo sheegay ...
Cayaartooy Wadnaha Laga Qalay Kaddib Markii Ay Shillin Qaniintay
Jiinoow 21/08/2017	442 Views
Markii ay sannadkii hore shillin qaniintay ciyaartooygii hore ee England ee kubadda hardanka (Rugby) waxa ay ku reebtey caabuq bakteria oo jirkiisa oo dhan ku faaftay. “Labo maalmood oo dhib badan ayaan maray, aad ayaan ula qandhaday, gurigana kama soo bixin” ayuu yiri Matt Dawson. Markii isbitaalka la geeyey waxaa laga heley xanuun ay cayayaanka u gudbiyaan bini’aadamka oo afka ...
Farmaajo Oo Masar Kula Kulmay Mid Kamid Ah Madaxwaynayaashii Horey Usoo Maamulay Soomaaliya
Jiinoow 21/08/2017	330 Views
Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa booqasho kujoogay dalka Masar, waxaana uu halkaas kulamo kula qaatay mas’uuliyiin ka kala tirsan jaaliyadda Soomaalida iyo dawladda Masar. Inta uu Qaahiro joogay Madaxwaynaha wuxuu la kulmay Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan kaas oo qaab deegaan ahaan u deggan halkaas. Labada madaxwayne ayaa qaatay kulan wada tashi iyo dardaaran ah,kaas oo ka dhacay guriga C/qaasim ...
Qabiilkee Qaadan Doona Guddoomiyaha Dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed? Yaa Ku Dulman? Sidee Se Loo Qaybiyay Xubnaha Muhiimka Ah?
Jiinoow 21/08/2017	1,482 Views
Maanta ayaa la rejeynayaa in lagu dhawaaqo guddoomiyaha dhallinyarada qaranka Soomaaliyeed, waxaana aan helnay haddii aan nahay Shaaciye.com xog badan oo kusaabsan arrinkaas. Guddoomiyaha ururka dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed waxaa qaadan doona maamulka Soomaaliland, gaar ahaan waa qof Isaaq ah, halka ku xigeenka la siin doono Galmudug, uuna yahay Habar-Gidir Sacad. Xoghayaha ururka dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed waxaa la siin doonaa sida ...
Farmaajo Ma Calanka Ayuu Soo Hilmaamay? Mise Soomaaliya Ma Mataleyn: (Sheeko Layaab Leh, Madaxwaynaha Oo Ku Dhacay Qalad Dastuuri Ah)
Jiinoow 21/08/2017	738 Views
Baraha bulshada waxaa wareegaya sawirka madaxwayne Farmaajo oo la fadhiya, shirna la qaadanaya dhiggiisa Masar C/fatax Siisii, islamarkaana aanu meesha oollin calanka Soomaaliya. Waxaa iska caado ah marka ay kulmayaan madax sidaas oo kale in mid kasta oo kamid ah calankiisa uu gadaal dhigto, balse sawirka baraha bulshada la isla wareegayay wuxuu ahaa mid Siisii uu gadaal yaalo calanka waddankiisa, ...
“Inagga Iyo Adduunka” (Sheeko Cajiib Ah Oo Cunsurriyadda Ka Hadleysa)
Jiinoow 21/08/2017	258 Views
Inagga iyo Aduunka Waa sheeko uu kal hore qoray Prof. Said Samatar (AUN). Waxay ahayd Wiil Soomaali ah oo 50kii u tahriibay dalka Ingiriiska. Wuxuu degey Magaalada Cardiff. Waxay is jeclaadeen gabar Ingiriiska cadaanka ah. Cunsuriyada xiligii aad ayey u saraysay. Markii uu damcay in uu guursado ayaa Waalidkii gabadha dhalay u diideen. Waxay u sheegeen in aysan suura gal ...
Goorma Ayaa Lagu Dhawaaqi Doonaa Guddoomiyaha Ururka Dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed?
Jiinoow 21/08/2017	78 Views
Wasiirradda dhallinyarada Soomaaliya ayaa saacadaha soo aaddan ku dhawaaqi doonta guddoomiyaha ururka dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed. Waa ururkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ay dawladda yaglesho, waxaana xubnaha ururkan uu ka koobnaan doonaa dhallinyaro laga soo xulay maamul goboleedyada. 9-qofood ayuu ka kooban yahay ururka dhallinyarada qaranka Soomaaliyeed, kuwaas oo kala ah, xubno ka socda Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, ...
Ma Dhabbaa In Madaxwayne Farmaajo Uu Ka Dhuuntay Kulan Madaxeed Kigali Ka Dhici Lahaa? (Sheeko Xiiso Badan
Jiinoow 21/08/2017	1,257 Views
Madaxwayne Farmaajo ayaa saakay ka duulay gagada caalamiga ah ee Aadan Cadde isagoo kusii jeeda dhanka iyo dalka Masar oo Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la leedahay. Safarkan waxaa uu kusoo aadayaa xilli wararka qaar ay sheegayaan in madaxwaynaha lagu casuumay caleema saarka madaxwaynaha Rwanda Paul Kigami, kaas oo todobaadkan ku beegan. Dadka qaar ayaa qaba in madaxwaynaha uu cagta sii ...
Waa Maxay Sababta Horjoogayaasha Al-shabaab Dawladdu Roogga-Cas Ugu Dhigtaa,Dhalinyaradana Tiirka Toogashada Lootagaa?W/Q: Khadar Ibrahim Aar.
Jiinoow 20/08/2017	471 Views
Waxaa wakhti aan sidaasi usii fogayn garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyey iyada oo Diyaarad khaas ah lagu sido ,Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) Afhayeenkii hore ee kooxda Al Shabaab. Mukhtaar Roobow Abu-Mansuur oo ay weheliyaan xubno ka tirsan dawlada ayaa soo gaadhay garoonka Aadan Cadde, waxaana si wayn loo adkeeyay amaanka garoonka iyada oo ...